TURKIGA CAD OO CAAN AH: MAXAY YIHIIN? - BEERAHA DIGAAGA
Caleemaha Cadaanka ah ee Turkiga
Shimbiraha sida hindhisyada ayaa aad u caan ah maanta, ma aha oo kaliya beeraha digaaga, laakiin sidoo kale qoysaska. Hilibka shimbirahan ayaa leh sifooyin cunto, tayo sare leh.
Xayawaankani waa kuwo aad u nadiif ah, oo aan daryeel lahayn. Caanaha ugu caansan ee shimbirkani waa turjumaan cad oo caan ah. Tani waxay ahayd mid aan hore loo arag, 60-kii hore ee Maraykanka. "Waalidiinta" ee noocaan ah waa huudhaan cad iyo naxaas weyn oo turkiga ah.
Inkasta oo ay ka soo jeedaan ajnabigaa, turkigan waxay ku dhowaad isla markiiba soo muuqdeen Midowga Soofiyeeti, waxayna ku jiraan meelaha bannaan ee furan ilaa maanta. Xayawaanka Tani waa mid caalami ah, maadaama ay tahay shimbiraha kuwaas oo hela miisaanka si fiican, u siiyaan ukun ku filan, sidoo kale si habboon u waafajinta xaaladaha cimilada.
Caanahan Tani waxay leedahay kala duwanaansho gaar ah.
Shimbirahaas Waxaa jira 3 nooc - iftiin, dhexdhexaad ah iyo culus.
Xaaladda kowaad, turkiga waxay helayaan 8-10 kg oo miisaankoodu yahay, iyo turkiga - 4.5-6 kg.
Xayawaankani waxay ku koraan beeraha digaaga ee baqashada. Marka shimbir gaaro da'da 8-10 usbuuc, iyo miisaanka 2-2.5 kg, markaa waxaa loo diraa in la gowraco.
Kiis labaad, turkiga koraan ilaa 13-18 kg, iyo turkiga ku koraan ilaa 6-8 kg.
Kiis saddexaad, turkiga cuno 20 - 25 kg miisaanka, iyo turkiga - 9 - 12 kg. Miisaanka qashinka ee shimbirahan waxay helayaan 5-6 bilood, miisaankuna wuxuu gaaraa 12 - 14 kg.
Muuqaal farabadan oo ka mid ah noocyada this turkiga waa xaqiiqda ah marka gaaraan 5-6 bilood da'da Shimbiraha ayaa intooda badan joojiya koritaanka. Si aad u taageerto horumarinta hordhaca ah ee turkiga, waxaad u baahan tahay inaad ku qaadato shaqaale badan iyo qalab. Sidaa darteed, waqtigan shimbiraha waa la gowracay.
Intaa waxaa dheer, baqtiyadu waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican, hilibkoodu wuxuu leeyahay dhadhan sare. Sidaa darteed, iibinta turkiga kuwan waa faa'iido badan.
Marka lagu daro jihada fulintaan, kuwaani turkiga waxaa loo isticmaalaa in lagu gudbo noocyada kale. Sidaas darteed waxaa jira noocyo cusub oo turkiga ah oo leh tayada jirka oo wanaagsan.
Turkiga waxaa la siiyaa inta badan in la gowraco, laakiin turkiga ayaa awood u leh inay dhigaan ukunta. Dumarku waxay soo galaan xilligan markay gaadhayaan 8-9 bilood.
Ukunku wuxuu soconayaa wax ka badan 6 - 8 bilood. Wadar ahaan, hal turki ah ayaa laga heli karaa 100 - 130 ukumood, halka miisaankiisu yahay hal ukun oo u dhaxeeya 75 ilaa 90 garaam.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo naas-nuucyada caan ah.
In muuqaalka, turkiga cad-naaso ka duwan yihiin noocyada kale ee shimbir this. Wakiilada noocyada noocaan ah waxay leeyihiin dhajis qaabab ah, oo u muuqda si gaaban, guluubku waa mid ballaaran oo aad u ballaaran, lugaha waa mid dhexdhexaad ah oo dherer ah, xoog leh, oo casaan leh. Boorashka Turkiga waa cadaan.
Dayactirka shimbirahan waxay u baahan tahay shaqo adag. Marka hore, waxaad u baahan tahay diyaariso meel lagu hayo shimbiraha. Waa in ay ahaato mid diirran sidaa darteed xayawaanku ma ahan kuwo supercooled.
Haddii aad leedahay coop digaag, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad qalab u hesho meel lagu hayo turkiga sida qolka digaagga.
Sida quudinta, turkiga waa in la siiyaa 2 nooc oo cunto ah - qallalan oo qoyan. Cuntada qallalan waxay ka kooban tahay hadhuudh iyo quudin, iyo qoyan - laga bilaabo macaan. Biyaha waa in lagu sameeyaa baaldiyo si markaa shimbiraha waaweyni aanay u gudbi Karin weelka.
Tirada quudinta waa 4 - 5 jeer maalintii. Guga iyo xagaaga, cawska ayaa lagu dari karaa wadarta guud, iyo xilliga qaboobaha - cawska la jarjarey.
Goob gaar ah ee cuntada ee turkiga waa in ay qaataan karootadasida ay tahay cuntada ugu fiican ee digaaga.
Xayawaankani wuxuu u baahan yahay xorriyadda dhaqdhaqaaqa, sidaas darteed waa in la sameeyaa khudaar gaar ah oo shimbiraha ay socon karaan. Waa suurad wacan in meesha uu ahaa cawska.
Si shimbirku u dhintaan, waa inay ahaataa ka ilaalin cudurada kala duwan.
Daryeelka waa in la qaataa si loo hubiyo in qolka shimbiraha lagu hayo uu nadiif yahay.
Shimbiruhu waxay u baahan yihiin in laga ilaaliyo jiirka, kuwaas oo ah sidayaal noocyo kala duwan oo fayruusyo ah iyo caabuqyo. Sidaa darteed, qolka turkiga ku nool waa in la nadiifiyaa.
Nadiifinta waa in lagu sameeyaa xal chlorophos. Uma baahnid in aad xakamayso dhammaan meelaha dillaacsan iyo boogaha meesha infekshanku ku noolaan karo. Ka dib markii shimbiraha la gowracay, kiriimka ugu horeeya waa la fuliyaa. 24 saacadood ka dib, waxaad u baahan doontaa inaad ku dhaqdo dhammaan qolalka qolka biyo kulul. Ka dib markaa waxaad u baahan tahay inaad dib u dhigto.
Hadda waxaad haysataa fursad aad ku dooranaysid jinsi gaar ah oo turkiga ah, naas-nuujinta taas oo ku siin doonta fursadda ma aha oo kaliya inaad hesho khibrad cusub, laakiin sidoo kale inaad hesho lacag ku filan iibka shimbirkan.